လူတစ်ယောက် ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ငါးပိရည် ကြိုက်တာမကြိုက်တာ နဲ့ တိုင်းလို့ရပြီလား လို့ ဝေဖန်သူ ကိုဒဲ့ မေးလိုက်တဲ့ MRTV4ရဲ့မင်းသမီးချောလေးဖြိုးသံသာချို(ရုပ်သံ) – Let Pan Daily
လူတစ်ယောက် ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို ငါးပိရည် ကြိုက်တာမကြိုက်တာ နဲ့ တိုင်းလို့ရပြီလား လို့ ဝေဖန်သူ ကိုဒဲ့ မေးလိုက်တဲ့ MRTV4ရဲ့မင်းသမီးချောလေးဖြိုးသံသာချို(ရုပ်သံ)
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ MRTV 4ရဲ့ မင်းသမီးချောလေးဖြိုးသံသာချို ကို ပရိတ်သတ်ကြီး အားလုံး သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ စက်တင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့တုန်းကလူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတာကတော့ တိုင်းသိပြည်သိ မင်းသမီးတစ်ယောက်က ငပိရည်ကို ရွံတယ်လို့ ပြောတဲ့ Status ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမင်းသမီးက ငပိရည်စားတာမြင်ရင် အန်ချင်တယ်လို့ ပြောခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ MRTV4မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြိုးသံသာချိုကလည်း ငပိရည်မုန်းတယ်ဆိုတဲ့ ထိုမင်းသမီးရဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အခုလိုပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်လည်ပြော ဆိုလာပါတယ်။
“လူတစ်ယောက် ရဲ့ အဆင့်အတန်းကို တိုင်းလို့ရတဲ့ ပေတံ ပေါ်ပြီလား? ညီမ ငါးပိရည် ကြိုက် တာက အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး .. အရင်တုန်းကတည်းက ကြိုက်တယ်။ ညီမတို့ တစ်မိသားစုလုံးကလည်း ငါးပိရည် ကြိုက်ကြတယ်။ လူတိုင်း စားသုံးနေတဲ့ အရာတစ်ခုကို ရွံစရာ တို့ ၊ ဘာတို့တော့ မပြောသင့်ဘူး။ရုံးကြီး တစ်ခုတည်း အတူတူ အလုပ် လုပ်နေကြတဲ့ ညီအစ်မ တွေကြား စိတ်အခန့် မသင့်လို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ” လို့ ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ပရိသတ်တော်တော်များများက ငပိရည်ကို ရွံစရာအဖြစ်ပြောတဲ့ ထိုမင်းသမီးအကြောင်းကိုလူမှုကွန်ယက်ပေါ် မှာဝေဖန်ကြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိက မကြိုက်ပေမယ့်သူတစ်ပါးကြိုက်တဲ့ အရာတစ်ခုကိုအခုလို ဝေဖန်တာတော့မဖြစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲပရိတ်သတ်ကြီးရေ။ ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့အမြင်လေးကိုလည်း မျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိတျသတျကွီးရေ MRTV 4ရဲ့ မငျးသမီးခြောလေးဖွိုးသံသာခြို ကို ပရိတျသတျကွီး အားလုံး သိကွမယျထငျပါတယျနျော။ စကျတငျဘာလ (၁၆) ရကျနတေု့နျးကလူမှုကှနျယကျပျေါမှာ နာမညျကွီးနတောကတော့ တိုငျးသိပွညျသိ မငျးသမီးတဈယောကျက ငပိရညျကို ရှံတယျလို့ ပွောတဲ့ Status ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိုမငျးသမီးက ငပိရညျစားတာမွငျရငျ အနျခငျြတယျလို့ ပွောခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ ဝဖေနျမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျခံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ MRTV4မငျးသမီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဖွိုးသံသာခြိုကလညျး ငပိရညျမုနျးတယျဆိုတဲ့ ထိုမငျးသမီးရဲ့ စိတျထားနဲ့ ပကျသတျပွီး အခုလိုပဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွနျလညျပွော ဆိုလာပါတယျ။
“လူတဈယောကျ ရဲ့ အဆငျ့အတနျးကို တိုငျးလို့ရတဲ့ ပတေံ ပျေါပွီလား? ညီမ ငါးပိရညျ ကွိုကျ တာက အခုမှ မဟုတျပါဘူး .. အရငျတုနျးကတညျးက ကွိုကျတယျ။ ညီမတို့ တဈမိသားစုလုံးကလညျး ငါးပိရညျ ကွိုကျကွတယျ။ လူတိုငျး စားသုံးနတေဲ့ အရာတဈခုကို ရှံစရာ တို့ ၊ ဘာတို့တော့ မပွောသငျ့ဘူး။ရုံးကွီး တဈခုတညျး အတူတူ အလုပျ လုပျနကွေတဲ့ ညီအဈမ တှကွေား စိတျအခနျ့ မသငျ့လို့ ဖွဈခဲ့ရတာပါ” လို့ ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ
ပရိသတျတျောတျောမြားမြားက ငပိရညျကို ရှံစရာအဖွဈပွောတဲ့ ထိုမငျးသမီးအကွောငျးကိုလူမှုကှနျယကျပျေါ မှာဝဖေနျကွနတောပဲဖွဈပါတယျ။မိမိက မကွိုကျပမေယျ့သူတဈပါးကွိုကျတဲ့ အရာတဈခုကိုအခုလို ဝဖေနျတာတော့မဖွဈသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုပါပဲပရိတျသတျကွီးရေ။ ပရိတျသတျကွီးရဲ့အမွငျလေးကိုလညျး မြှဝပေေးခဲ့ကွပါဦးနျော။ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
မိမိုကျလှနျးနတေဲ့ ဖကျရှငျလေး နဲ့ ပုရိသတှေ ကွှသှေားစမေယျ့ ခြောကလြာ ရဲ့ ပုံရိပျမြား
တက်ကသိုလျ ကြောငျးသားတှေ ကို အမွဲ ကြောငျးတကျ မှနျစခေဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
အိမျမှာ နရေငျး ခဈြစရာကောငျး အောငျ ပို့ဈပေး ဓာတျဖမျး နတေဲ့ မငျးသမီး ခြောလေး ဖူးပှငျ့သခငျ